Starfish Squeaky ခွေးသွားတိုက်တံ၊ မပျက်စီးနိုင်သောကိုက်ခံနိုင်သောခံနိုင်ရည်ရှိသောခွေးဝါးကစားနည်း၊ -dogstore-Chinese,China,Manufacturer,Supplier,Factory,Price
Burmese Starfish Squeaky ခွေးသွားတိုက်တံ၊ မပျက်စီးနိုင်သောကိုက်ခံနိုင်သောခံနိုင်ရည်ရှိသောခွေးဝါးကစားနည်း၊
ခွေးကကစားစရာကိုကိုက်တဲ့အခါခွေးကအရုပ်ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစေတဲ့အတွက်ပါ ၀ င်တဲ့ပီပီတစ်လုံးကဆူညံသံကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါခွေးကလေးကဒီ squeaky ကစားစရာကိုက်သောအခါ, ကခွေးရဲ့အကျိုးစီးပွားဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ခွေးပျော်ရွှင်စွာဒီကစားစရာနှင့်အတူကစားစေခြင်းငှါတစ် ဦး ပီပီအသံစေနိုင်သည်။
ဤထုတ်ကုန်ကိုဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Bayer မှထုတ်လုပ်သော TPR ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ခွေးများ၏ရေရှည်ကိုက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဤခွေးအံဆွဲသည်ပေါင် ၅ မှ ၁၀၀ ပေါင်ရှိသောအိမ်မွေးခွေးများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ပိုင်ရှင်သည်အိမ်နှင့်အိမ်တွင်း၌မပျက်စီးနိုင်သောခွေးကစားစရာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: ၆.၅ * ၆.၅ * ၁.၆ လက်မ၊
အထုပ်: သေတ္တာနှုန်း 120pcs, 22.2 * 14.17 * 22.83inches, 46.5lbs
Ito ay isang interactive na laruan ng pusa para sa loob ng bahay, na sobrang nakatutuwa at dinisenyo na may makatotohanang estilo ng cartoon. √√√√Ito rin ay isang nakakatawang laruan ng pusa, na maaaring magamit bilang laruang pusa p
Toi kuri, Taakaro Huri Kino, Taakahi Tohe Mo Te Kai, Te Pika Hoko Tuuturu, Taonga Taonga
Nga waahanga: Ko te taakaro kuri he maha tenei, i honohono i nga ahuatanga o te takaro, te toha kai, te taunekeneke me te rangatira, te whakapai ake i IQ, te tuku i te awangawanga me te whakapiki i te kaha o te kuri. √√√√. √√√√
Ġugarell tal-Klieb, Ġugarell tal-Klieb tal-Ġbid, Ballun li Jnixxi l-Ikel, Ball Molar, Ġugarell li Jqassam l-Ikel li Jġbed l-Ikel tal-Ġebel
Karatteristiċi: Il-kelb jilgħab mal-ġugarell kuljum jista \_'jiżviluppa l-intelliġenza u jżid l-interess fil-logħob. √√√√Il-protuberanzi molari ta \_'360 grad għandhom żewġ daqsijiet differenti, li jistgħu jnaddfu aħjar is-